Paphos ma ọ bụ Ayia Napa - ihe ịhọrọ?
Njem nleta Europe
Obodo agwaetiti mara mma nke Cyprus na- adọta ọtụtụ ndị nlegharị anya, obodo ya - ezigbo paradaịs maka ndị na-achọ ntụrụndụ, n'ike mmụọ nsọ na ntụrụndụ nke ntụrụndụ. Dị ka ị maara, ihe ka ọtụtụ n'ime obodo ndị dị n'obodo ahụ dị n'àgwàetiti ahụ ma ha niile dị nnọọ mma. Ebe ndị njem nleta na Cyprus bụ Paphos na Ayia Napa . Ha nwere ọtụtụ esemokwu, ma na akụrụngwa na ntụrụndụ. Anyị ga - agwa gị uru na obodo ndị a - ya mere i nwere ike ikpebi ihe ị ga-ahọrọ: Paphos ma ọ bụ Ayia Napa.
Ọtụtụ ezinụlọ nwere ụmụntakịrị na-abịa Paphos ma ọ bụ Ayia Napa iji zuru ike. Mmiri dị ọcha na-adọrọ mmasị ha, ebe dị n'ụsọ oké osimiri na ebe ndị dị ịtụnanya. Na Paphos e nwere ọtụtụ osimiri oké osimiri, ụzọ ọpụpụ nke anaghị adị mfe mgbe niile ịchọta. Ọ bụ ama n'obodo a nke a maara maka Cyprus Coral Bay, ebe oke osimiri dị na ya. N'ime ya kwa ụbọchị, ọtụtụ ndị njem nleta na ndị obodo, ya mere, ndị na-achọ udo na udo, ọ gaghị abụ ebe dị mma. Ma maka ụlọ ọrụ na-adịghị mma, ụlọ ọrụ na-agba oyi, Coral Bay bụ ebe ntụrụndụ mmiri, n'ihi na ọtụtụ ụgbọ mmiri na-aga n'akụkụ osimiri. Tụkwasị na nke ahụ, enwere ụlọ nkwakọba ihe, nkwarụ na klọb na ụsọ oké osimiri, nke ndị ọbịa niile ga-achọ.
Na Ayia Napa, ọnọdụ dị iche iche dị iche iche na osimiri. E nwere ọtụtụ n'ime ha, ma ekpuchi ekpere mmiri na-ejupụta na ájá ájá. A na-ewere osimiri dị iche iche nke Ayia Napa otu n'ime ndị kasị mma na Saịprọs. Ndị a ma ama bụ: Nissi Beach (ebe ndị ọzọ na-eme mkpọtụ) na Makronisos Beach (nke kwesịrị ekwesị maka ezinụlọ nwere ụmụ). Ị ga-ahụ na Ayia Napa ọtụtụ osimiri nke dị na hotels, na onye ọ bụla na-enweta nnukwu ọkwa site na ndị njem nleta. Ọ bụrụ na ị na-abanye n'otu n'ime ụlọ ọrụ ndị a, mgbe ahụ ịga leta n'ụsọ oké osimiri ga-abụ n'efu. Niile osimiri ndị dị na Ayia Napa na-agbakọta, n'ezie, nkasi obi, ịdị ọcha, ese foto na ihe ndị mepere emepe. Ndị isi obodo na-achọ nlezianya nyochaa na oke osimiri dị ọcha ma dị mma maka ntorobịa na-eme ihe ọjọọ na maka ndị nleta kacha nta.
Otu n'ime ebe kachasị mma nke Paphos bụ ụlọ nkwari mmiri nke Aphrodite . Gbalịa ileta ya ma ọ bụrụ na ị nọ n'obodo, ma saa mmiri ya. Akwụkwọ akụkọ na-ekwu na mmiri na ebe a nwere ikike anwansi iji weghachite ahụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na i kwetaghị na ya, mgbe ahụ ị nwere ike ịnweta nanị ebe dị egwu. Ihe omuma atu nke obodo bu Ogige nke Nnunu na Anumanu , ebe otutu umu umu nnunu ebe obibi biri: tuccas, flamingos, owls na parrots. N'ime ogige nke ogige ahụ, e nwere giraffes, antelopes na kamel. Nchịkọta nke ogige ahụ na-edozi ihe ngosi pụrụ iche kwa ụbọchị. Ebe a ga-amasị ndị okenye na ụmụaka ma nye ọtụtụ ezi echiche. Ndị na-akwado mmiri mmiri nwekwara ọtụtụ ihe ịhụ na Paphos. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịbanye n'ọdọ mmiri ahụ n'akụkụ oké osimiri ma mara nke ọma na ọtụtụ narị afọ gara aga.
Ihe omuma nke oma na Ayia Napa bu Cape Greco, nke di nso na nkume. N'ebe a, ị nwere ike ịga na ụlọ ndị dị adị n'ezie, nke kere okike n'onwe ya. Ikekwe, ọ dịghị onye ga-anọgide na-enweghị mmasị mgbe ọ gara ileta Park Park . Nke a bụ ebe dị ịtụnanya, ọ nwere ọtụtụ mmasị dị mma maka ụmụaka na ndị okenye. Ị nwere ike inwe obi ụtọ na ezinụlọ gị dum na Aquapark Water Word , n'ime ya ị ga-ahụ ọtụtụ ihe ngosi dị iche iche ma nọrọ oge magburu onwe ya. Kwa ụbọchị na Park Park nke Ayia Napa, a na-arụ ọrụ ndị dị ebube, bụ ebe ọrụ mara mma na-arụ bụ ọrụ dị mkpa - dolphins. N'ebe a, dịka ọ bụla dolphinarium, ị nwere ike na-egwu mmiri na ha, ọrụ dị otú a ga-abụ onye ọ bụla mmasị. Ndị njem nleta dị omia na Ayia Napa na Park nke Dinosaurs - ebe a na-edebe ebe obibi, nke nwere ihe oyiyi nke dinosaur nke buru ibu (ọkara ndị dị adị). Ebe niile na-amasị ebe a.
Ebe ndị mere eme
Maka ndị njem na-achọ ịmatakwu akụkọ ihe mere eme na nlegharị anya nke Saịprọs , ọ bụ ihe siri ike ịhọrọ n'etiti Paphos na Ayia Napa. Na Paphos ị ga-achọta ihe ndị dị otú ahụ: Ụlọ Ọgwụ Archaeological nke Kato, ebe ili ozu nke Royal , ebe obibi ndị mọnk nke St. Neophyte the Recluse , na ebe e wusiri ike na Port. N'obodo, ị nwere ike ịga na ụlọ ngosi ihe ngosi abụọ dị ịrịba ama: Ụlọ ihe ochie nke Archaeological Museum nke Kuklia na ihe odide nke Saint Solomon . N'ime ha ka ị ga-amụta akụkọ ihe mere eme oge ochie na ịmara ihe dị n'akụkọ ihe ochie.
Na Ayia Napa, ebe ndị isi akụkọ ihe mere eme bụ: Covo Greco Forest Park, Cape Greco, oghere ndị omere na grotto, ebe obibi ndị mọnya nke Ayia Napa , Chọọchị St. George, ebe obibi ndị mọnk nke Virgin Mary, mkpọmkpọ ebe nke Makronisos .
Ememe abalị na Ntụrụndụ
Paphos, ma e jiri ya tụnyere Ayia Napa, bụ obodo dị jụụ. Mana ọ ka dị n'okporo ámá obodo a Bar Street, nke a ma ama maka ndụ abalị. O nwere ọtụtụ ihe nkwụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, nakwa ụlọ osisi kachasị mma nke obodo - Robin Hood Bar.
Ayia Napa bụ obodo nke "na-abịa ndụ" n'abalị. N'elu osimiri ọ bụla na n'obodo ahụ ị ga-ahụ ọtụtụ nkwakọba ihe, ụlọ nkwakọba ihe na ụlọ mmanya. Ayia Napa bụ ebe etiti nke ndụ abalị na Cyprus, n'eziokwu, ọtụtụ ndị na-eto eto na-abịakwute ya.
Ememe nke Vatican
Ememe na Luxembourg
Paphos ma ọ bụ Larnaca - nke ka mma?
Osimiri nke Estonia
Ebee ka Masedonia nọ?
Slovenia - ihe na-adọrọ mmasị
Bosnia na Herzegovina - ebe nkiri
Ememe na Sweden
Ebe ntụrụndụ ski na Switzerland
Slovenia - Visa
Crete ma ọ bụ Saịprọs - nke ka mma?
Iwu nke Saịprọs
Nri nke Bosnia na Herzegovina
Nnukwu akpa n'elu ubu
Nri poteto na pan nke frying - ngwa ngwa ngwa ngwa maka nri dị mfe maka ụbọchị ọ bụla
Uwe si Pavlov Posad shawls
St. Nicholas na-eme mmehie - ekpere maka oge niile
Mmanụ aṅụ na gastritis
Akpụ akwụkwọ maka ụmụ agbọghọ nọ n'afọ iri na ụma
25 akwụkwọ akụkọ Guinness dị iche iche na ọ dịghị onye chọrọ ikwugharị
Udara "Morozovka" - nkọwa nke ụdị
Mmekọahụ na mba
Ogige Botanical (Bali)
Yucca ubi - elekọta
Ihe ndina ejiji aka
Kedu ihe ụgbọ mmiri ahụ na-atụ banyere ya?
Ihe ndina akwa
Kedu uru mmanụ aṅụ dị na combs?
Ịgba afa site na Tarot kaadị maka ọdịnihu
Mgbu na ovaries
Uwe na uwe nke Chicago
N'ibu oke na ume: Amanda Bynes na-ezube ịlaghachi n'ọrụ ahụ?
Ime afọ asaa - mmepe nwa ebu n'afọ